Ku-macaamil-dejinta Debian: Hordhac - Shabakado kombuyuutar oo loogu talagalay SMEs | Laga soo bilaabo Linux
1 Ka ugu fudud ayaa ugu fiican
3 Qeexitaannada iyo iskuxirayaasha sida ku xusan Wikipedia iyo ilo kale
3.2 Mashiinka farsamada
3.4 Fur Isbahaysiga Virtualization (OVA)
3.7 Kunteenarada Linux LXC
4 Xiriirinta kale ee xiisaha leh
5 Gaarsiinta xigta?
Ka ugu fudud ayaa ugu fiican
Sawirka madaxa ee bogga ugu weyn ee XtratuM, Hypervisor si gaar ah loogu talagalay Nidaamyada Dhexgalka ama Dhexgalka ee Waqtiga dhabta ah, waxaan heleynaa sawirka soo socda:
"Kuweena Mabda 'Aasaasi ah rakibaadda, qaabeynta, iyo maamulka adeegyada, oo ay ku jiraan dabcan Gudbinta, waxay si buuxda ugu raacsan tahay farriinta «Ka fudud, ayaa ka fiican", taasi waa, Ka ugu fudud ayaa ugu fiican. "
La Wax-qabad waa mowduuc aad u ballaadhan oo adag. Wax badan kama qorayno isaga. Waxaan soo bandhigi doonnaa kaliya qeexitaanno iyo xiriirinno bogag aan soo jeedineyno in la akhriyo iyo / ama la barto, iyadoo loo eegayo xiisaha aqriste kasta u leeyahay. Waxaan soo jeedinaynaa akhri boggaga Wikipedia Ingiriisiga, iyo ilo kale.
Ma dooneyno inaan ku galno gaarsiinta sida caadiga ah Sida loo sameeyo dhowr amarro, iwm, iyadoo aan marka hore la siinin ugu yaraan hage horudhac ah oo ku saabsan mawduuca. Waan ognahay in qaar ka mid ah Akhristayaal Dulqaad La ’ Iyagu ma akhriyaan hordhaca oo waxay toos u aadaan sida loo sameeyo. Tallaabo laga xumaado, ka dibna mar dambe ay yimaadaan su'aalaha fekerka ah ee marar badan aan si waafi ah uga jawaabi karin, maaddaama ay suurtagal ahayn in aan wax walba ogaanno.
Waxaan rajeyneynaa, ka dib markaad wax yar aqriso xitaa qodobkan, akhristaha inuu fikrad ka yeelan doono waxa ay tahay Wax-qabad iyo isaga Xaaladda taagan. Sidoo kale, inay leedahay xiriiriyeyaal taxane ah oo kuu oggolaanaya inaad wax badan ku ballaadhiso hawl maalmeedkan si ficil ah qof kasta oo adeegsada kombuyuutar xilligan.
Qeexitaannada iyo iskuxirayaasha sida ku xusan Wikipedia iyo ilo kale
Sayniska Kombiyuutarka, Wax-qabad waxaa loola jeedaa ficilka abuurista nooca wax dalwaddii halkii wax dhab ah, oo ay ku jiraan ka qalabka kumbuyuutarka kumbuyuutarka ah, nidaamyada hawlgalka, qalabka keydintaiyo ilaha isku xirka kumbuyuutarka. Virtualization-ku wuxuu bilaabmay 60-yadii, isagoo ahaa hab lagu qaybiyo ilaha nidaamka ee a kombiyuutarka weyn, inta udhaxeysa codsiyada kala duwan. Tan iyo markaas, macnaha erayga Wax-qabad si joogto ah ayey u sii fideysaa.
La Wax-qabad o Madal Farsamaynta waxaa loola jeedaa abuurista mashiin dalwaddo ah, oo u shaqeeya sida midka dhabta ah, oo leh nidaam hawlgal. Software-ka ku shaqeeya mishiinnada dalwaddu waxay ka duwan yihiin qalabka aasaasiga ah ama ilaha jireed. Tusaale: mashiin jireed oo socda Debian 8 "Jessie" wuxuu martigalin karaa mashiin dalwad leh Ubuntu Trusty 14.04 system ka hawlgala.
Dhanka Virtualization waxaa loogu yeeraa «Martigeliyaha - martigeliyaha»Ku socota kombiyuutarka dhabta ah ama muuqaalka ah ee u ku shaqeynayo laftiisa. Ku mashiinka dalwaddii Waxaa loo yaqaan "Martida - Guest«. Shuruudaha martigeliyaha y Guest waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro softiweerka ku shaqeynaya mashiinka dhabta ah kan softiweerka ku shaqeeya mashiinnada farsamada. Si aad u software ama qalabeynta taasi waxay abuureysaa mashiinnada farsamada ee ku jira qalabka martigeliyaha, waxaa loogu yeeraa Hypervisor - Kormeeraha.
Noocyada kala duwan ee Waxsoosaarka:
Wadarta Macaamiil - Macaamiil buuxa: Waxaa loola jeedaa Ku dhowaad wadarta jilitaanka qalabka dhabta ah, taas oo u oggolaanaysa barnaamijka casriga ah - oo sida caadiga ah ka kooban nidaamka hawlgalka - inuu socdo iyada oo aan wax laga beddelayn.
Qeybinta Qeybinta - Qayb Fududeynta: jawiga bartilmaameedka Si buuxda looma ekeynin, laakiin qeyb ahaan. Natiijo ahaan, barnaamijyada qaar ee ku shaqeeya Martida ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in wax laga beddelo.
Paravirtualization - paravirtualization: Ma jiro jawi qalab lagu ekeysiiyo. Barnaamij kasta oo Marti - Guest ordaa on a Gooni Gooni, sida haddii ay ku shaqeynayaan nidaamyo gooni ah. Wax ka beddelka gaarka ah ee barnaamij kasta oo marti ah ayaa lagama maarmaan u ah fulintiisa deegaanka noocan ah.
La qalab caawinta hufnaanta waa hab lagu wanaajinayo waxtarka guud ee habka waxqabadka. Waxay tusineysaa in processor-rada ama processor-yada loo yaqaan 'CPU' waa inay lahaadaan taageerada lagama maarmaanka u ah wacyigelinta, iyo sidoo kale qaybaha kale ee qalabka laftiisa.
Virus-ka-sameynta Qalabka (Hardware Virtualization) Maahan La Mid Ku Labashada Aktarka Qalabka. Ku dayashada, qayb ka mid ah qalabka ayaa mid kale shabahaya, halka dhanka Virtualization-ka, Hypervisor -kuwaas oo ah barnaamij-ku-dayasho software qayb gaar ah ama gebi ahaanba.
Xisaabinta, a mashiinka dalwaddii Waa software jilista kumbuyuutarka waxayna ku shaqeyn kartaa barnaamijyo sida inay tahay kumbuyuutar dhab ah. Barnaamijkan waxaa asal ahaan lagu qeexay inuu yahay "nuqul wax ku ool ah oo go'doonsan oo ah mashiin jireed." Waqtigan xaadirka ah, macnaha ereyga waxaa ka mid ah mashiinno farshaxan ah oo aan lahayn wax u dhigma oo toos ah oo ah qalab kasta oo dhab ah.
Un Hypervisor - Kormeeraha o Kormeerka Qalabka Mashiinka - Monitor Mashiinka Virtual VMM waa madal u oggolaanaysa adeegsiga farsamooyinka xakamaynta farsamooyinka kala duwan si loo isticmaalo, isla mar ahaantaana, nidaamyo kala duwan oo hawlgal ah (aan wax laga beddelin, ama wax laga beddelay sida kiiska paravirtualization) isla kombiyuutarka.
Fur Isbahaysiga Virtualization (OVA)
La Fur Isbahaysiga Virtualization, iyadoo la ixtiraamayo cinwaankeeda Ingiriisiga, waa Mashruuc Iskaashi oo ka socda Linux Foundation. Dalladan waxaa ka go'an qaadashada barnaamijka bilaashka ah iyo barnaamijka 'Source Source Software' - Ilaha furan xalalka hufnaanta ee ay ka mid yihiin KVM, iyo waliba softiweerka lagama maarmaanka u ah maamulkiisa, sida orso. Consortium wuxuu kobciyaa sheekooyinka guusha ee macaamiisha kala duwan, wuxuu dhiirigeliyaa isdhexgalka, wuxuuna dardargeliyaa ballaarinta nidaamka deegaanka ee xallinta dhinacyada saddexaad, agagaarka KVM.
Software-ka Bilaashka ah ee ay kobciso OVA:
KVM waa hypervisor. Waxaa abuuray Qumranet, Inc., Shirkad softiweer ah oo softiweer ah oo xilligaas soo jiidatay fiiro gaar ah oo ku saabsan aqbalaadda degdegga ah ee moduleka KVM ee ku duugan Linux kernel. Waxay bixisay «Qalabka ICE desktop ee adag»Iyada oo ku saleysan Mashiinnada Maskaxda ee Virtual Desktop-ku-saleysan Kernel, laguna xirayo hab maamuuskeeda SPICE. On September 4, 2008 shirkadda Red Hat, Inc. la helay Qumranet qiimaha $ 107 milyan.
orso waa softiweer loogu talagalay maareynta aaladaha waxqabadka. Waa software bilaash ah oo furan. Waxaa aasaasay Red Hat oo ah mashruuc bulsho oo ay Casriyeynta Hat Enterprise Virtualization. oVirt waxay u oggolaaneysaa maareynta dhexe ee mashiinnada dalwaddii, ilaha shabakadda, keydinta iyo xisaabinta, laga soo qaado websaydh si fudud loo isticmaalo, oo madal madaxbannaan si loo helo. Kaliya Hypervisor si rasmi ah loogu taageeray naqshadaha X86 64 waa KVM, in kasta oo dadaallo lagu bixinayo taageeridda naqshadaha PPC y ARM noocyadeeda soo socda.
libguestfs waa maktabad ku qoran luqadda C iyo xirmo qalab ah oo marin loogu helo oo wax looga beddelo sawiro disk dalwaddii on a madal hufnaan. Qalabka waxaa loo isticmaali karaa daawashada iyo tafatirka mashiinnada dalwaddii ee ay maamusho libvirt iyo faylasha ku dhex nool. Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa qoraalka qoraalka -qoraalka- in wax laga beddelo ama la abuuro mashiinno casri ah.
Maareeyaha Mishiinnada Virtual - Maamulaha Mashiinka Dhaqaalaha waa barnaamij loo yaqaan 'Red Hat' oo sidoo kale loo yaqaan maareeye, Magacaabi in xirmada sidoo kale ku jirto keydka Debian. Waa codsi Desktop ah oo loogu talagalay maaraynta mashiinnada farsamada. Waxaa loo adeegsadaa abuurista, qaabeynta iyo hagaajinta boggaga cusub. Waxay leedahay macmiil VNC ah oo aan ku marin karno konsoleer garaaf ah oo ku saabsan barta martida. Xirmada maamule ahaan ee uu keeno Debian Jessie, borotokoolka SPICE ayaa sidoo kale lagu soo daray si loo helo qunsuliyada garaafka ah ee mashiinnada dalwaddii.
Xen Waa Hypervisor kaas oo adeegsada nashqad-yar-yar, oo wuxuu bixiyaa adeegyada lagama maarmaanka u ah nidaamyo badan oo hawlgal si isku mar ugu wada shaqeeya isla qalabka kombiyuutarka. Isaga Jaamacadda Cambridge University Lab, ayaa soo saaray noocyadii ugu horreeyay ee Xen, oo sidoo kale ah software bilaash ah. Debian 8 "Jessie" waxay leedahay keydadkeeda xirmada xen-hypervisor-4.4-amd64.
OpenVZ waa xalalka nidaamka hawlgalka heerka sare ee Linux. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku sameysato server-yo qarsoodi ah, aamin ah oo gaar ah isla server-ka jirka, kaas oo bixiya adeegsi wanaagsan ee agabyada qalabka. Waxay sidoo kale hubineysaa in codsiyada ku shaqeeya mid kasta oo ka mid ah server-yada aysan khilaafsaneyn. Mid kasta Server khaas ah oo khaas ah - Server Virtual Private Server (VPS), waxay u socotaa sida saxda ah adeegaha kaligiis taagan. Iyagaa dib loo bilaabi karaa, oo u oggolaan karaa marin u helka isticmaalaha xididka iyo kuwa kale ee caadiga ah. Waxay leeyihiin cinwaanadooda IP-ga, xusuusta, hababka, faylasha, codsiyada, maktabadaha nidaamka, iyo feylasha qaabeynta.
Debian ayaa laga saaray kernel-yada loo beddelay taageerada OpenVZ bakhaarradooda illaa Debian 7 "Wheezy".
Kunteenarada Linux LXC
Haamaha waa goobo ku go'doonsan nidaamka qalliinka. Aag kasta wuxuu leeyahay meel u gaar ah oo loogu talagalay nidaamka faylka, shabakadda, PID, processor, iyo qoondaynta xusuusta. Waxaa lagu abuuri karaa iyada oo loo marayo Kooxaha Xakamaynta iyo Namespaces muuqaalada lagu daro Linux kernel. LXC Waa tikniyoolajiyad la mid ah kuwa kale oo ku dhisan hufnaan heer kernel ah sida OpenVZ iyo Linux-VServer.
jasiiradaha waa xalka maareynta iyo kormeerka mashiinnada dalwada ee ku shaqeeya KVM, Xen, OpenVZ ama VMware. Debian Jessie waxaa ku jira bakhaarradeeda iyada oo loo marayo baakado kala duwan oo tilmaamaya wakiiladooda ama kaydka Archipel. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka raadi "archipel" adoo adeegsanaya 'Synaptic' ama 'via' kaydinta raadinta kartida.
Xiriirinta kale ee xiisaha leh
Fur vSwitch- Furan software furan oo u oggolaanaya abuuritaanka qalab beddelaad ah.
Fur QRM: Jiilka Soosocda ee Madal Furan oo loogu talagalay Maareynta Xarunta Xogta - Xarunta Macluumaadka.
Docker: mashruuc furan oo awood u leh inuu otomatikada geeyo barnaamijyada ku jira konteenarrada softiweerka.
nextmox: server furan ilaha loogu talagalay bay'adaha waxqabad.
VMware- hoosaad ka tirsan shirkadda EMC (oo ay leedahay shirkadda Dell Inc) oo bixisa barnaamijyo wax ku ool ah oo loo heli karo kombuyuutarrada iswada waafaqsan ee X86
Waalidka: softiweer bilaash ah oo loogu talagalay abuurista mashiinno casri ah. Debian ayaa xirmooyinka la xiriira barnaamijkan u raray laanteeda «contrib«.
FuranNebula: ONE wuxuu fidiyaa faa iidooyinka barnaamijyada waxtarka leh ee laga helayo hal kheyraad jireed oo loogu talagay bangiga kheyraadka, iyadoo laga jarayo adeegaha, kaliya maahan kaabayaasha jir ahaaneed, laakiin sidoo kale goobta jir ahaaneed.
Akhristayaasha si naxariis leh ugu filnaaday maqaalka illaa xariiqdan waxay ogaan doonaan sida ballaadhan iyo isku-duwidda adduunkan hadda jira ee Farsamaynta. Waxaan rajeyneynaa inay u adeegi doonto hagitaan safarkaaga.
Hadda Qemu-KVM wuxuu ku jiraa Debian!
Xusuusnow in tani ay noqon doonto maqaalo taxane ah oo ay qortay Shabakadaha Kombiyuutarka ee loogu talagalay SMEs. Waan ku sugeynaa!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku-dhex-dhexaadinta Debian: Hordhac - Shabakado kombuyuutar oo loogu talagalay SMBs
Hordhac aad uwanaagsan oo ku saabsan guud ahaanba. Waad ku mahadsantahay shaqada qorista qoraalkan. Waxaan sugeynaa kuwa soosocda.
Thanks Fico hordhaca.
Si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay oo leh xiriiriyeyaal ku filan oo si qoto dheer loogu sii daayo maaddada.
Taasi waa ujeedada Mario. Waxaan u maleynayaa in qaar badani aysan caddeyn baaxadda hadda jirta ee ku saabsan arrinta ku-habboonaanta.